WAA KUMAA QOFKA INDHEER-GARAD AH ‘INTELLECTUALS’? – Somali News
Indheer-garad, garasho, aqoon, mutacalim intaas oo dhan isku macno miyay noqoni karaan?
Dad badan ayaa aaminsan in indheer-garadnimada ay ka timaado xagga aqqoonta oo kali. Dadka waxay kaloo aaminsanyihiin marka wax la barto oo kali ayaa indheer-garad la noqdaa. Sheekada sidaa mooday ma ahan. Waxaa marmarka qaar bulshada ku dhex arkaysaa qof indheergarad ah hadana aanan waxbo qorin, laakiin ay tahay haybad uu illaahay siiyay innuu hadal ku gudbini karo. Wax qorista looma dhasho ee waa wax la barto. Qofkuna marka uu hayo fikrad gudbin uga baahan waa in uu wax qorista isbaraa oo caadaystaa. Nin ka mid ah ragga ay Soomaalidu maanta fekerkiisa iyo aqoontiisa aad u qaddariso ayaa laga sheegay in uu yirri “Waxa aan intaa ku hadlayo warqad muggeed kama qori karo.”
Dabcan kama qori karo waayo isma uu barin, kumana baraarugsana muhimadda ay qoristu u lee dahay aqoontiisa. Labada arrimood (aqoonta iyo qoristu) waa in ay iswataan ee aanay marnaba kala hadhin. Aqoon aan qorrayn iyo qoraal aan aqoon lahayn midkoodna barako ma leh.
Indheer-garad ‘Intellectuals’ waa qof bilow ahaan isticmaala maskaxdiisa, iyada oo aysan khasab ama muhiim ahayn in uu xirfad ama aqoon kale leeyahay. Noocaan kartida ah oo Alle qofku siiyay ayaa waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay hibo Alle baxsho ee aan dugsi iyo duggaal waxbarasho laga raadsan. Khuburada cilmiga maskaxd wax ka tilmaamaa waxa ay qofkaas oo kale ku sheegaan in uu yahay ‘life of the mind’ oo ah “Nolosha maskaxda”.
Qofka marmarka qaar asiga ayaa isfahmi kara innuu yahay qof indheer-garad ah oo waxwalbo tusaalayni kara. Laakiin haddii aadan ku kalsoonayn indheer-garadnimadaada waxaad sameyni kartaa wax aqris badan si aad wax badan ugu faa’ido dadkii horre ee indheer-garadka ahaa. Aqriska buuggaagta waxaa la yiraahdaa
FIKIRKAADA WAA NO MUHIIM